Dhizaini Dhizaini: Mafonti, Mafaira, MaAcronyms uye Marongero Matsananguro Martech Zone
Pane zvakati wandei zvematemu anoshandiswa pakutsanangura dhizaini uye iyi infographic kubva Peji.
Kufanana nechero hukama hwaunodyara, zvakakosha kuti vese mapato vari kutaura mutauro mumwechete kubva pakutanga. Kuti tikubatsire kutsvaira pamutauro wako wekugadzira, takagara pasi nevanyanzvi vezvigadziri uye takawana mazwi avanoshandisa kazhinji nevatengi, uye ayo anowanzo gumburisa munhu wepakati zvishoma.
Iyo infographic inopa tsananguro uye tsananguro yeyakajairika maitiro terminology.
Dhizaini Maitiro terminology:
Wireframes - chimiro chakakosha icho chisati chagadzira dhizaini yezvinhu.
Comps - mushure memawadhi emawadhi, danho rinotevera rekugadzira, kazhinji kana dhizaini ichienda padhijitari.
kumumvuri - nhanho yekupedzisira yaireva kupa pfungwa yepedyo yechigadzirwa chinoshanda.
Graphic Dhizaina Chirevo
Kubuda ropa - kubvumira dhizaini kuti ipfuure kumucheto kwepeji saka hapana margin.
Grid - inoshandiswa mukudhinda uye dhizaini dhizaini kubatsira kuyananisa zvinhu kuti zvigadzire kuenderana.
Nzvimbo chena - iyo nzvimbo yakasiiwa isina chinhu kuunza tarisiro kune zvimwe zvinhu zviri papeji.
Gradient - ichipera kubva kune rimwe vara richienda pane rimwe kana kubva kune opaque kuenda kune yakajeka.
Padding - iyo nzvimbo pakati pemuganhu nechinhu chiri mukati mayo.
kumahombekombe - iyo nzvimbo pakati pemuganhu nechinhu chiri kunze kwayo.
Typographic Dhizaini Dhizaini
Zvinotungamira - mitsara yemavara akapatsanurwa zvichidzika, inozivikanwawo sekuti kukwirira kwetambo.
Kuziva - kugadzirisa chinzvimbo chakatwasuka pakati pezvakanyorwa mushoko.
Typography - hunyanzvi hwekuronga mhando mhando nenzira dzinoyevedza.
Font - kuunganidzwa kwemavara, mamakisi, nhamba uye zviratidzo.
Webhu Dhizaini Mazwi
Pazasi pechipinda - iyo nzvimbo yepeji iyo mushandisi yaanofanirwa kupururudza kuti aone.
wirirana - webhu dhizaini iyo inogadzirisa iyo dhizaini yemhando dzakasiyana saizi.
Resolution - iyo nhamba yemadhora pamasendimita; 72dpi yemazhinji skrini, 300dpi yekudhinda.
Mavara eWebhu - mavara anoshandiswa pawebhu, anomiririrwa nekodhi-hexadecimal kodhi.
Webhu akachengeteka mafonti - mafonti anowanikwa nemidziyo yakawanda, saArial, Georgia, kana Times.
Tags: pazasi pepetakubuda ropacmykcompstsanangudzomugadziridhizaina dhizainidpikuitamafontiGIFgradientgidhijpegkuchenjerakutungamiriramarginpaddingwebmodoPDFpngppizvikabvapsdChisarudzowiriranargbterminologymazwitypographyuiuxmavara ewebhuwebhu akachengeteka mafontichena nzvimbochenawaya
7 Nzira idzo AI iri Kuvandudza Email Kushambadzira